कटारी क्षेत्र पुनःमाओवादीको आधार इलाका बन्ने छः अध्यक्ष दाहाल कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योग, खानी, वन लगायतका क्षेत्रलाई जनताका जनजीविकासँग जोडेर उपयोग गर्ने नीति
सन्ताेष कार्की(युवराज) बिहिबार, मंसिर १६, २०७८
कटारी । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कटारी नगरपालिकाको नगर कमिटी अध्यक्ष मणिराज दाहाल उर्फ बादल जनयुद्धका एक योद्धा पनि हुनुहुन्छ । केही दिन अघि मात्र माओवादीको केन्द्रको गाउँ/नगर पालिका सम्मेलनबाट अध्यक्षमा सर्वसहमत निर्विरोध निर्वाचित पनि हुनु भएको थियो । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कटारी नगरपालिकामा चुनाव जित्नको लागि माओवादीको रणनीति कस्तो हुन्छ ? के कारणले माओवादीले कटारीको स्थानीय सरकारमा आफुलाई उभ्याँउन सक्छ ? सम्बृद्ध कटारी नगरपालिका बनाउन के गर्नु पर्छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कटारी नगर कमिटीका अध्यक्ष दाहालसँग जनभावकर्मी युवराज कार्की (सन्ताेष) ले गर्नुभएकाे संवाद प्रस्तुत छ ।
जनभाव डटकममा स्वागत छ !
जनभाव डटकमलाई धन्यवाद !
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कटारीको नगर कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अब कटारी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई अन्य पार्टीभन्दा शक्तिशाली बनाउन के गर्न पर्छ ?
अहिलेको राजनीतिक दृष्टीकोणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) देशकै पहिलो पार्टी हो । त्यसो भएकाले कटारी नगरपालिकामा पनि माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी नै हो । अबको निर्वाचनमा कटारी नगरपालिकाका जम्मा १४ वटै वडामा पहिलो पार्टी बनाउने गरी अघि बढेका छौँ । अबका दिनमा संगठन बिस्तारलाई जोड दिन्छौँ । बिकृति र बिसंगितकाविरुद्धमा माओवादी पार्टी निरन्तर लडिरहने छ । हामीले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु माओवादीको पहिलो प्रथामिकता हो । अबको निर्वाचनसम्म जाँदा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने गरी अघि बढेका छौँ । जसमा ‘सांगठानिक, बैचारिक, राजनैतिक कार्ययोजना बनाएका छौँ । ति कार्य योजनाहरुलाई कार्यन्वय गर्दा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्छ ।’
कटारीमा माओवादी केन्द्रले लिएको कार्ययोजनाले पहिलो पार्टी बन्छ त ?
बन्छ । अन्य पार्टीभन्दा माओवादी केन्द्र शक्तिशाली हुन्छ । अबको निर्वाचनमा कटारीको स्थानीय सरकारमा पनि माओवादी केन्द्र हुन्छ ।
कटारी क्षेत्र जनयुद्धको समयमा जनयुद्धको आधार इलाका पनि थियो । तर, अहिले त्यो जनयुद्धको आधार इलाका टुटेको छ, भत्केको छ । त्यो टुटेको, भत्केको जनयुद्धको आधार इलाकाको मर्मत नगरिकन कसरी कटारीको स्थानीय सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई उभ्याँउन सकिन्छ ?
जनयुद्धको समयमा आजकै व्यवस्थाको लागि कटारी नगरपालिका क्षेत्रबाट १८ जना महान सहिदहरुले रगत बगाउनु भएको छ । उहाँ(सहिद) हरुको रगतको जगमा निर्माण भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामी छौँ । शक्तिशाली माओवादी केन्द्र निर्माणको लागि केही चुनौती पनि छन् । तर, चुनौतीभन्दा पनि सम्भावना धेरै छन् । हामी गर्वकासाथ भन्छौँ, तिनै महान सहिदहरुको रगतले आजको व्यवस्था आएको हो । हिजो हामीले जुन संकल्प गरेका थियौँ । सहिदहरुको सपना पुरा गर्ने, घाइते योद्धाहरुको उचित मुल्यांकन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौँ । अझ भनौँ अब हामी जनयुद्धको आधार इलाका क्षेत्रमा टुटेका फुटेका मनहरुलाई जोड्छौँ । जनयुद्धका सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता परिवारलाई पार्टीमा जोड्छौँ । हामी सहिद परिवार, घाइतेहरुतिर फर्कन्छौँ । हामी वर्गियपक्षधर बन्छौँ । किसान मजदुरको घर आगनमा फर्कछौँ । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि केपी ओलीको अहंकारको कारण समस्या आएको थियो । कतै कार्य योजनाविहीन भए जस्तो थियो । हामीले हाम्रो बर्गलाई भुलेको जस्तो थियो । सहिद परिवारलाई छाडेको जस्तो थियो । तर, माओवादीले कहिले पनि सहिदका सपना भुल्ने छैन्, घाइते तथा वेपत्ता परिवारजनलाई भुल्ने छैन् । जनयुद्धका सहिद, घाइते, अपाङ्गा, बेपत्ता परिवारको सम्मान गर्नु भनेको, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेकपालको रक्षा गर्नु हो । यस कटारी नगरपालिकामा माओवादीले हिजो गरेका गल्तीहरुको गम्भिरतापूर्वक समीक्षा गरेका छौँ । हामीले वडादेखि नगरपालिकासम्म भएका सम्मेलनबाट अठोट लिएका छौँ । हामी हाम्रो वर्ग तथा किसान, मजदुर, दलित, जनजाति तथा क्षेत्रीय तथा बर्गिय उत्पीडनको पक्षमा उभिने संकल्प गरेका छौँ । जुन संकल्पले माओवादी केन्द्रलाई एउटा उच्चाइमा पुर्‍याउने छ । कटारी क्षेत्र जनयुद्धको आधार इलाका हिजो थियो । आज पनि माओवादीकै आधार इलाका बनाउने गरी अघि बढेका छौँ ।
जनयुद्धका सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवारप्रति फर्कँदै माओवादीको नयाँ आधार इलाका निर्माणमा जुट्नु भएको हो ?
गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिको रक्षाको गर्नको लागि माओवादी सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ता परिवारप्रति फर्कँन जरुरी छ । फर्कँन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षा गर्नु नै सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ता परिवारको सम्मान हो । यो व्यवस्था जोगाउन निम्ती हामी किसान, मजदुरतिर फर्कनुपर्छ । हार्म फर्कन्छौँ । माओवादी गाउँ फर्केपछि आधार इलाका पुन निर्माण हुन्छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र कटारी नगरपालिकामा तेस्रो दल भएको थियो । अब पहिलो हुँदै जित्नको लागि के गर्नु पर्छ ?
कटारी नगरपालिका खानी, कृषी, पर्यटन, जडिबुटीको उर्वर भुमि भएको नगरपालिका हो । प्राकृति स्रोत साधानले भरिपूर्ण क्षेत्रको उपयोग गर्दै, जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषी क्षेत्रमा जोड दिनु पर्छ । अव्यवस्थित सडकलाई व्यवस्थित बनाउने गरी योजना बनाउनु पर्छ । आर्थिक सम्बृद्धिसँग जनतालाई जोडनु पर्छ । पार्टीले विगतमा गरेका कमीमजोरीलाई सच्याँउदै जनताका जनजीविकासँग जोडिएका एजेन्डा समावेश गरेर मास्टर प्लान(गुरुयोजना) बनाउनु पर्छ । पार्टी संगठनलाई गोलबन्द बनाउँदै जनताका एजेन्डामा जोड दिनु पर्छ । जसको कारण आगामी निर्वाचनमा हामीले जनताको साथ पाउने छौँ । चुनाव जित्ने छौँ । हिजोको जनसरकार आज स्थानीय सरकारको बनेको छ । यो संघीयता माओवादीले जन्माएको व्यवस्था हो । जसले जन्माएको सन्तान हो । उही आमाले मात्र त्यो सन्तानको रक्षा गर्न सक्छिन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तीन सरकारको परिकल्पना माओवादीले गरेको हो । यसको रक्षा माओवादीले मात्र गर्न सक्छ । जसको कारण कटारीमा मात्र होइन, अब देशैभरी माओवादीले जनताको साथ पाउने छ । माओवादी केन्द्रले जित्ने छ । कटारी क्षेत्र पुन माओवादीको आधार इलाका बन्ने छ ।
मास्टर प्लानको कुरा गर्नु भयो । चुनाव नजिकिदै छ ? समय छोटो छ । छोटो समयमा बनाउने मास्टर प्लान कस्तो हुन्छ ?
जुन संघीय पुर्नसंरचना भएको छ । त्यो पनि माओवादीको मास्टर प्लान हो । अनि यो कटारी नगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने योजना हामीले तयार बनाएर राखेका छौँ । खाली के भयो भने, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तो, जसको नीति उसको नेतृत्व नहुँदा कता न कता, के नमिलेको जस्तो भएको छ । कटारीलाई सम्बृद्ध बनाउने मास्टर प्लान छ । कटारीमा नदी कटानको समस्या छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने । खेती योग्य जमिनको संरक्षण गर्ने । हामीसँग कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योग, खानी, वन लगायतका क्षेत्रलाई जनताका जनजीविकासँग जोडेर उपयोग गर्ने नीति छ । जनताका समस्याको समाधान गर्ने मास्टर प्लान तयारी छ । जनतासामु लान मात्र बाँकी छ । अब त्यही मास्टर प्लान लिएर जनताको घर घरमा जाने छौँ ।
माओवादी केन्द्रले कटारी नगरपालिकाको वर्तमान स्थानीय सरकारलाई कसरी मुल्यांकन गरिरहेको छ ?
जसको नीति, उसको नेतृत्व नहुँदा सुशासन कायम नहुँदो रहेछ । कटारीमा त्यही भएको छ । अहिले कटारी नगरपालिकाको स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन् । जनताले छिटो छरितो तरिकाले सेवा पाइरहेका छैन्न । स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर आगनको सरकार हो । जनताले आगनमा आएको सरकारको अनूभूती गर्न पाएका छैनन् । अब सुशासनको लागि माओवादी, सम्बृद्धि कटारी नगरको निर्माणको लागि माओवादी, वैज्ञानिक शिक्षाको लागि माओवादी, कृषी, पर्यटनको विकासको लागि माओवादी हुनु पर्छ । हामीले सबै कुराको समीक्षा गरेर मतदातालाई आव्हान गरेका छौँ । किसान, मजदुर सम्पूर्णलाई हामीले आव्हान गरेका छौँ । जसको नीति हो, उसको नेतृत्व हुनुपर्छ । वडादेखि नगर सम्मेलनसम्म आउँदा जनतामा माओवादीको लहर आएको छ । माओवादीप्रति जनता केन्द्रिकृत हुँदै आएका छन् । हामीले हिजोको इतिहास दोहोरिन नदिने, संकल्प गरेका छौँ । कटारी नगरको सम्बृद्धिको मास्टर प्लान तयारी छ ।
कटारी नगरमा सुशासन कायम भएन भन्नुभयो । त्यसको मतलव भ्रष्टचार बढ्यो भन्नु भएको हो ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार कटारी नगरपालिका चलेको छैन् । जसको कारण सुशासन कायम हुने नै भएन् । कटारी नगरपालिकामा भएको जनशक्तिलाई वैज्ञानि ढंगबाट परिचालन गर्न नसक्नु । जनताप्रति उत्तरदायी कार्ययोजना बनाउन नसक्नु । जनतालाई छिटो छरितो तरिकाले सेवा दिन नसक्नु लगायतका धेरै समस्या छन् । जनताको पक्षमा नीति बनाउँदै कार्यन्वय गरेको देखिनदैन् । जसको कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नचलेपछि सुशासन कायम भएको छैन् । मैले भ्रष्टचार बढेको दाबी गरेको छैन् । मात्र सुशान छैन् भनेको हुँ ।
फरक प्रसंगमा जाउँ । उदयपुरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ । अहिले माननीय सुरेश कुमार राई (हिमाल) प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले उदयपुरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ मा विकास निर्माणको लागि कस्ता कस्ता योजना कार्यन्वयमा ल्याउनु भएको छ ? बुदागत रुपमा भनिदिनुहोस् न ।
माननीय सुरेश कुमार राईको पहलमा अर्थात उहाँ निर्वाचित भएपछि ल्याउनु भएका धेरै योजनाहरु छन् । जसमा लिम्चुङबुङमा सुनकोसी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम सुरु भएको छ । त्यो उहाँकै पहलमा भएको हो । कटारी नगरपालिकाको वडा नम्वर १४ मा सुनकोसी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको डिपिआर भएर ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रमै प्रभाव पर्ने दुई खानेपानी आयोजनाहरु बन्दै छन् । त्यो उहाँकै देन हो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि काम भएका छन् । जसमा सिन्धुलीको खनिया खर्क हुँदै उदयपुर कटारीको गहुँबारी, माझखर्क, रसुवाबाट खोटाङ जोड्ने सडक पनि कार्यन्वयनमा आएको छ । यसमा वर्षेनी बजेट विनियोजन भइरहेको छ । उहाँकै (माननीय सुरेश कुमार राई) कार्यकालमा एउटा आकार लिने छ । अरु साना योजनाहरु धेरै छन् । खोलानालामा पुलहरु बनेका छन् । शिक्षामा विशेष जोड दिनु भएको छ । संघीय सांसद सुरेशकुमार राई विजय भइसकेपछि शिक्षामा धेरै काम भएका छन् । उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी शिक्षामा छ । उहाँले जनताको पक्षमा, मतदाताको पक्षमा लगानी गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय योजनाहरु पनि ल्याउनु भएको छ ।
माननीय सुरेश कुमार राई मार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ मा आएका योजनाको संख्या हजार पुग्छन् ?
हजारभन्दा बढी छन् । उहाँको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र उहाँले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर थुप्रै योजनाहरु ल्याउनु भएको छ । अहिले ति योजनाहरुको काम भइरहेका छन् ।
सिद्धिचरण लोकमार्गको मर्मतको बारेमा माननीय सुरेश कुमार राईले के के पहल गर्नु भयो ? त्यस क्षेत्रको एउटा लाइफ लाइन लोकमार्ग हो । जनताहरु विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ?
सिद्धिचरण लोकमार्ग कटारी क्षेत्रको लाइफ लाइन सडक हो । यो सडक मर्मतको लागि जनताले लामो समयदेखि संर्घष गर्दै आइरहेका छन् । हामी पनि यो सडक मर्मत गर्नपर्ने पक्षमा नै छौँ । हामीले धेरै पटक संघीय सांसद माननीय सुरेश कुमार राईकै नेतृत्वमा उदयपुर उद्योग बाणिज्य संघ, यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, समाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसहितको टोली संघीय सरकारसमक्ष डेलिकेशन गएको थियो । त्यस वेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयमा डेलिकेशन गयौँ । त्यस डेलिकेशनमा उहाँकै (माननीय सांसद सुरेशकुमार राई) नेतृत्व थियो । यहाँ पनि संर्घष समिति बनाएर आन्दोलन ग¥यौँ । यी सबै कुरा गरिसकेपछि अहिले उक्त लोकमार्ग मर्मतको लागि ८० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा जर्नादन शर्मा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । संघीय सांसद सुरेशकुमार राईले संसद बैठकमा पटक÷पटक कुरा पनि उठाउँदै आउनु भएको छ । सिद्धिरण लोकमार्गको विषयमा उहाँ (माननीय सांसद सुरेशकुमार राई) लागि परिरहनु भएको छ । अर्थमन्त्रालयको प्रतिवद्धता पनि छ । कुनै पनि हालतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने । आयोजनाको कार्यालय कटारीमा राख्ने गरी तयारी भइरहेको मैले बुझेको छु ।
सिद्धिचरण लोकमार्ग बहुवर्षे आयोजनामा परिणत भएर भोलिका दिनमा मर्मत हुन्छ ? सिद्धिचरण लोकमार्ग नयाँ बन्छ ?
सिद्धिचरण लोकमार्ग मर्मत हुन्छ । नयाँ बन्नै पर्छ । मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक व्यवस्थित बन्छ । यो रणनीतिक लोकमार्ग पनि हो । जर्नादन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै वेला, माननीय सांसद सुरेशकुमार राईकै कार्यकालमा बहुवर्षे ठेक्का लाग्ने छ । नयाँ सिद्धिचरण लोकमार्ग मर्मतको काम अघि बढ्ने छ ।
अन्तिममा, कटारी नगरपालिकाका जनतालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
सुन्दर नगरी कटारी बासीलाई के भन्न चाहान्छु भने, अब हामी अर्को निर्वाचनतिर जाँदै छौँ । यो आउने निर्वाचनको लागि मात्र होइन् । सम्बृद्ध कटारी नगरपालिका बनाउनको निम्ती एक पटक गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको छ । कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने हो ? कुन पार्टीसँग भिजन छ ? यो व्यवस्था कस्ले लिएर आएको हो ? गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकका कुरा माओवादीले लडेर ल्याएको हो ? यो एजेन्डा सफल बनाउन माओवादीलाई नै अबको चुनावमा जनताले साथ दिनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यो एजेन्डा जित्यो भने किसानले जित्ने छ, मजदुरले जित्ने छ । त्यसकारण कटारीका जनसमुदायलाई माओवादी आन्दोलन भित्र गोलबन्द हुन आव्हान गर्दछु ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर १६, २०७८, ०८:१९:००